Space Army Jetpack Arcade bụ oge ịse 'em up nwa nwoke | Gam akporosis
Oghere Ugbo ala Jetpack Arcade bụ nnukwu ihe egwu na-agbapụ 'em nke ị na-ekwesịghị ịhapụ
Space Army Jetpack Arcade bụ ihe nchọpụta ka anyị na-aga n'ihu ịghọ nnukwu oge ịse 'em nke anyị na-akwado n'ihu ọha site na usoro ndị a. O nwere mmetụ ahụ na indie nke na-enye ya ihe anwansi iji kechie anyị na ahụmịhe ya.
Na otutu Jetpack Joyride na gameplay na ejiri ihe nlere anya nke na echetara anyi ihe omimi R-Type, anyị nwere egwuregwu egwuregwu na aka anyị nke a na - eme nke ọma freemium nke ọma iji nwee mgbagha na inwe ike ịzụta ndozi nke onye agha anyị nwere ohere. Ka anyị mee ya!
1 Na-eburu ngwá agha gị niile
2 Ọnọdụ Arcade na ozi na Space Army Jetpack Arcade
3 Nwere onwe ya na freemium siri ike
Na-eburu ngwá agha gị niile
Jetpack Joyride na-apịgharị n'akụkụ, anyị anyị ga-ahụ itinye aka n'ọtụtụ ọgụ, nke anyị ga-ebu ụzọ ghara ịchapu "ọta" nke ọta anyị, iji nweta ego nke egwuregwu ahụ nke ga - enyere anyị aka ịkwalite ọgụ na nchekwa.
Egwuregwu nke na-a payinga ntị na ya ekwela ka ndi iro ugbo ghara agha ha, ebe ọ bụ na ọtụtụ oge ọ ga - apụta na anyị enweghị ụzọ ọ bụla ga - esi nwee ike ịpụ ọfụma. Nke ahụ bụ, anyị ga-atụfu ọta ma anyị ga-abụrịrị ihe dị mfe maka ọrụ iro nke ọzọ.
Ogige Space Jetpack Arcade na-ewe anyị site na mbara igwe site na gburugburu ebe echekwara nke ọma nakwa na ha kwenyekwara tupu ihe dị iche iche na-eme nghọta ga-eme ka egwuregwu ha karịa afọ ojuju. N'okwu a, ha arụchaala ya nke ọma ka anyị wee nwee ike ịmata ihe na-echere anyị.
Ọnọdụ Arcade na ozi na Space Army Jetpack Arcade
Space Army Jetpack Arcade nwere tumadi na ọzọ nke ga - enyere anyị aka ịmechaa kpakpando 1 ruo 3 dị ka akara e nwetara. Nke ahụ bụ, anyị ga-alaghachikwuru ha mgbe onye na-akwado oghere anyị ka mma, ọ nwere ike tufuo ụfọdụ ihe na ọkwa izizi agaghị adị mfe iwepụ.
Otu n'ime ihe ngosi egwuregwu egwuregwu a bụ nkwalite ụgbọ mmiri. Anyị nwere ọtụtụ ọgbụgba dị iche iche iji nwalee ma si otú a meziwanye mbibi anyị na-eme ụgbọ mmiri ndị iro. N'oge na-adịghị anya, ha ga-adịrị ka ọ dị mfe ma si otú a anyị ga-enwe ọganihu ịchọpụta ndị isi na oge ntakịrị "epic".
Epics anyi n’atu aka maka ndi anyi si n’otu ugbo elu fega ozo gaa lee gburugburu ya anya na mbara ala ihe ngosi di nma nke na eme ka nlele nleba anya sitere na egwuregwu ohuru a.
Nwere onwe ya na freemium siri ike
Ọ bụ eziokwu na Space Army Jetpack Arcade enweghị ọtụtụ nyocha ma, mana ezuru iji nwude ọtụtụ ndị egwuregwu na-asụpe okwu n'ihi na ya gameplay, na protagonist na-efe efe veranda na ọchịchọ ka mma ya niile iji chebe onwe na ọgụ ọcha. A na-arụ ọrụ freemium nke ọma ma nwee mgbagha iji kwụọ onye nrụpụta ụgwọ n'azụ ọrụ a.
Un Egwuregwu nke dị mma nke ukwuu na nke anyị masịrị atụmatụ nke ụgbọ mmiri ya, yiri nnukwu R-indị na aesthetics, gburugburu na ndị pụrụ iche utịp projectiles na mgbawa. Nke ahụ bụ ikwu, ebe ị ga-etinye ihe, ha etinyewo ya kama nke ọma. N'ebe a ọ na-enweta ọtụtụ ihe ma anyị chọrọ ya kacha mma n'ihi na o kwesịrị ya.
Oghere Jetpack Arcade dị n'efu si Google Play Store na a uko freemium na a ihe karịrị afọ ojuju gaminggba Cha Cha ahụmahụ na niile etoju. Iji isiokwu a, ụdị na ogo, ị gaghị ahụ ọtụtụ egwuregwu, yabụ echela banyere ịwụnye ya. 100% kwadoro.
Ọ na-amasị ya nke ukwuu ma na-ahapụ onwe ya ka ọ gwuo site na oge mbụ iji mikpuo gị na ahụmịhe ya na nkeji gafere dị ka sekọnd.
Ọ nwere ezigbo egwuregwu nkọwa
Ogologo oge na oge dị iche iche
Ngwá agha dịgasị iche iche iji nwee ọganihu
Ọnọdụ ndị ahụ na-enye ihe omimi ya nnukwu njiri mara nke ọma n'ozuzu ha
Ogige Space Jetpack Arcade
Developer: ogige atụrụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Oghere Ugbo ala Jetpack Arcade bụ nnukwu ihe egwu na-agbapụ 'em nke ị na-ekwesịghị ịhapụ
Etu esi eme ka nkpuchi Discord nwee uzo mkpirisi gaa n'olu olu
Samsung Galaxy Tab S6 malitere ịnata Otu UI 2.5